Layaabka Dunida: Cuntada Uu Quuto Waxa Ka Mid Ah Oo Uu Ugu Jecel Yahay Saliid Ijiinta Gawaadhida - Wargane News
Home Entertainment & Lifestyle Layaabka Dunida: Cuntada Uu Quuto Waxa Ka Mid Ah Oo Uu Ugu...
Nin u dhashay wadanka Yemen balse dhawaan ka soo guuray wadanka Sucuudiga oo uu muddo badan ugu maqanaa shaqo ayaa dunida ka yaabiyay kadib markii uu soo bandhigay caado uu muddo badan ku soo caano maalay taasi oo ah in uu sida caanaha ama sharaabka kale u cabbo Saliidda Ijiinka Gawaadhida loogu tala galay isaga oo la sheegay in uu wakhtigan aynu ku jirno gudashada bisha barakaysan ee Ramadaan ay qaybta ugu muhiimsan ka tahay Cuntada loogu talo galo wakhtiga Afurka.
Ninkan ayaa ka shaqayn jiray Xarun lagu daryeelo gawaadhida iyo Geerash weyn oo farsamada gawaadhida ah oo ku yaalla magaalo Ganacsiyeedda Sucuudi Carabiya ee Jidda ka hor intii aanu dhawaaan dib ugu soo guryo noqon dalkiisa Hooyo ee Yemen. Wargeyska Yemen Today oo ninkan booqasho ugu tagay ayaa waxa uu ku soo warramayaa in Ninkan Yemeniga ahi caadadan ku soo dhaqmayay muddo ku siman soddomeeye sanadood isaga oo mudadaasi caado u lahaa in uu wakhtiga uu doono saliiidda gawaadhida iyo xaydha gawaadhidaba sida uu doono u cabo una cuno isaga oo aan waxba ku noqon caafimaad ahaan.
Maxamed Bin Cali oo ah ninkan Yemeniga ah ee caadaystay cabitaanka saliidda gawaadhiga oo u warramayay wargeyska Yemen Today isaga oo faahfaahinaya caadadan layaabka leh ayaa yidhi: “Cabitaanka Saliidda Gawaadhida waxa aan cabayay muddo ku siman labaatan sandood. Markii ugu horraysay waxa aan tijaabiyay wakhti ku beegan 1993-kii aniga oo ka shaqayn jiray goobo lagu iibiyo agabka gawadhida gaar ahaan saliidaha iyo Xaydhaha. Urta saliidda ayaan jeclaa waxaanan jeclaaday in aan tijaabiyo. Markii ugu horraysay waxaan cabay qaddar kooban oo saliid ah waxaanan dareemay in aanan waxba ku noqon. Muddo bil ah kadib ayaan hadana isku dayay in aan cabbo saliidda gawaadhida waxaanan sidaa ku noqday nin caado ay u tahay arrintani. Waxaan dareemaa in ay ii tahay sida sharaabka kale ee caadiga ah wax dhib ah oo ay igu haysaana ma jirto caafimaad ahaan iyo dhadhan ahaanba”.
Bin Cali ayuu wargeysku ku tilmaamay nin caadadiisan layaabka sii wata xataa maanta oo ay tahay bishii Ramadaan, waxaabu ku darsaday cuntada uu qaato wakhtiga Afurka. “Waxaan si gaar ah u jecelahay saliidaha lagu farsameeyo wadanka Sucuudiga oo aan u arko kuwo ka tayo wanaagsan kana dhadhan wanaagsan kuwa kale ee dibadaha laga soo dhoofiyo. Waxaan cabi karaa hal litir balse waxaan wakhtigan todobaadkiiba cabbaa laba litir aniga oo yaryaraysta si aanan u dareemin wax dhib ah maadaama lagu jiro bishii Ramadaan” sidaa waxa yidhi ninkan saliidda lagu qaatay ee Yemeniga ah oo warbaahinta la hadlayay. Saliidaha uu inta badan ninkani cabbo ayaa lagu sameeyey dalka Sucuudi Carabiya.
Cajiib: Garsoore Maraykan Ah Oo Naftiisa Xukun Ku Riday Markii Moobilkiisu Ku Soo Dhacay Isaga Oo Shaqo Ku Jira